Blogs - MyanmarITPro - A Social Network for Myanmar IT Professionals
HomeMy PageForumsBlogsMM UnicodeMembersGroups
February 2012 Blog Posts (10)
How Can I Runacreated web page without needing Visual Studio ?
Visual Studio ကနေ မ Run ပဲနဲ့... Web Page ကို Browser ပေါ်မှာ ဘယ်လို Run လို့ရလဲမသိ.. ဖြေပေးပါအုန်း....
ရေးပြီးသား Website ပါ.... Added by ဟိန်းထက်အောင် on February 28, 2012 at 4:56pm —
IT Computer Training Center မှ မတ်လတွင် ဖွင့်လှစ်သင်ကြားမည့် Web Development With PHP သင်တန်းကို အရစ်ကျ (3) ကြိမ်ခွဲပြီးတက်ရောက်နိုင်ခြင်း
IT Computer Training Center မှ မတ်လတွင် ဖွင့်လှစ်သင်ကြားမည့်
Web Development With PHP သင်တန်းကို အရစ်ကျ (3) ကြိမ်ခွဲပြီးတက်ရောက်နိုင်ခြင်း
ကိုယ်ပိုင် Dynamic Website တစ်ခုဖန်တီးလိုသူများအတွက်နှင့် Professional Web Developer ကောင်းတစ်ယောက်အဖြစ်… Continue
Added by Kyaw Min Naing on February 25, 2012 at 1:36pm —
No Comments Joomla 2.5.x(Ubuntu 11.10/12.04) ကို Installation လုပ်ဆောင်ခြင်း..
Joomla 2.5.x(Ubuntu 11.10/12.04) ကို Installation လုပ်ဆောင်ခြင်း.. Added by sannoo on February 24, 2012 at 2:23pm —
No Comments Job Vacancy -ASP.Net C# Programmers
Participate in coding, testing, implementation and maintenance
Timely reporting to the team leader;
Develop and update user guides;
Identify and solve technical problems and processes;
Work with Game Programmers to ensure that the game-based contents integrate seamlessly with the integrated application… Continue
Added by Phyu Sin Kyaw on February 23, 2012 at 4:00pm —
2 x Senior Web/Mobile Developers - 200K to 400K plus plus
Web Developer/Mobile with JAVA/.NET/… Continue
Added by Zeya on February 21, 2012 at 9:20am —
Jobs DB နဲ့ Job Street website တွေမှာ.....
Jobs DB နဲ့ Job Street တွေမှာ..... Member တွေကို Job Aleart မေးလ် ထဲကို ဘယ်လိုပို့တာလဲ.... ဘယ်လိုရေးရလဲ... Sample Code လေးဘာလေး ရှိရင်ဖြစ်ဖြစ်... Share ကြပါအုန်း..မိတ်တွေတို့.....
Added by ဟိန်းထက်အောင် on February 20, 2012 at 10:24pm —
inviting the IT market
i want to invite,
who want to makeacomputer market or need accessories?
i can supply computer accessories,
the best quality and fair prize.Free Trading cost i haveafactory in hong kong . if u interest contact me in this mail phyiphyozaw@gmail.com Added by Phyi Phyo Zaw on February 20, 2012 at 12:08pm —
No Comments ဥာဏ်စမ်းလေးတွေ ဖြေကြည့်ရအောင်
နည်းပညာတွေ တိုးတက်လာနေပြီဆိုတော့ သိချင်တာလေးတွေလည်း များပြားလို့လာပါတယ်။ ဒါကြောင့် သိချင်တာလေးတွေ မေးမြန်းစပ်စုလိုက်ပါတယ်။ ဖြေပေးပါဦးနော်။ဒီနေ့ခေတ်မှာ အကြီးမားဆုံး နည်းပညာကုမ္ပဏီကြီးတွေအဖြစ် ယခုအချိန်အထိ ရပ်တည်နေကြတဲ့ Cisco/ Microsoft/ Apple/ IBM စတဲ့ ကုမ္ပဏီကြီးတွေက ဘယ်လိုထုတ်ကုန်တွေနဲ့ စပြီး လုပ်ကိုင်ခဲ့ကြသလဲဆိုတာကို သိချင်မိတယ်။ ဒီနေ့အချိန်မှာ ရှေ့ဆုံးမှာ ဦးဆောင်လုပ်ကိုင်နေတဲ့ ထုတ်ကုန်တွေနဲ့ ကွဲပြားခြားနားတာတွေလည်း ရှိနိုင်တယ်။ အစဉ်တစိုက် စထုတ်ခဲ့တဲ့ ထုတ်ကုန်ကို အခြေခံထားတဲ့… Continue
Added by manawphyulay on February 18, 2012 at 1:02pm —
IT COMPUTER TRAINING CENTER မှ ဖေဖေါ်ဝါရီလ 17 , 18 , 19 , 20 ရက်နေ့များတွင် ဖွင့်လှစ်မည့် Professional Web Design Course သင်တန်းအား အရစ်ကျ (3) ကြိမ်ခွဲ၍ တက်ရောက်နိုင်ခြင်း
IT COMPUTER TRAINING CENTER မှ
ဖေဖေါ်ဝါရီလ 17 , 18 , 19 , 20 ရက်နေ့များတွင် ဖွင့်လှစ်မည့်
Professional Web Design Course သင်တန်းအား အရစ်ကျ (3) ကြိမ်ခွဲ၍ တက်ရောက်နိုင်ခြင်း
Professional Web designer… Continue
Added by Kyaw Min Naing on February 9, 2012 at 1:08pm —
Skynet ရဲ့ရလဒ်တစ်ခုပါ၊ ကျွန်တော်က အင်တာနက်သုံးချင်လွန်းလို့ Skynet မှ 1024kbps (1Mbps) ကို လစဉ်ကြေး ၁၀၀၀၀၀ ကျပ်၊ တပ်ဆင်ခ၊ စက်ပစ္စည်း အားလုံးပေါင်း ၁၆ သိန်းကျော် ပေးပြီး ၀ယ်သုံးနေတာပါ။ အခုတော့ဗျာ ကြည့်ကြပါဦး၊ ဒီ software (site) က Google က လမ်းညွှန်ထားတဲ့ software ပါ၊ test လုပ်တဲ့အချိန်ကလဲ… Continue
Added by Kyaw Winn Paing on February 8, 2012 at 3:35pm —
Myanmar IT Pro - The essence of Being Together
လုပျငနျးခှငျကငျြ့စဉျ ၁၂ ခကျြ
Why Frameworks Suck?
Burma Viral Video
Now we can get FREE Web Conferencing form ConferencingNow.com
What is eKyat?
လုပ်ငန်းခွင်မှ လူငယ်များအတွက် အဆင့်မြင့်အသက်မွေးမှု အတတ်ပညာသင်တန်းကျောင်း CVT Myanmar
သီချင်း ခေါင်းစဉ်လေးများနှင့် နိုင်ငံခြား အလုပ်သမား ဘဝ
New Li-Fi technology to connect computers with the help of light bulbs
အင်တာနက်သုံးရင်း တစ်နေ့ကို $160 ရမည့် Online ငွေရှာနည်း
ကွန်ပျူတာပိုမိုမြန်ဆန်သွက်လက်လာစေ ရန် HD freeing up ပြုလုပ်ခြင်း Facebook ကြော်ကြများအတွက်လင့်များ
Thayet myo hacking day virus ကို သတ်ကြည့်ရအောင်
"သားသားကြီးလာရင် Game Developer လုပ်မယ်"
Professional ဖြစ်လိုသူများအတွက် အင်တာနက်မှ လေ့လာနည်းများ
အင်္ဂလိပ်စာလေ့လာလိုသူတွေအတွက် (မြန်မာလို)စာအုပ်တွေဒေါင်းလုပ်လုပ်မယ် (ဦးအောင်ဟိန်းကျော်၊ဦးသိန်းလွင်၊ရွှေမင်းဝန်ဦးဘုန်း.....)
ချစ်လားမချစ်လားသိဖို့အတွက်အားလုံးကို နည်းလမ်း၁၂ ခုဝေမျှပေးချင်ပါတယ်။
Singapore Government Schools Vs Private Schools
2013December (2)October (1)September (2)July (1)June (2)May (1)April (1)March (2)February (5)January (11)2012December (2)November (4)October (18)September (9)August (3)July (8)June (10)May (5)April (9)March (4)February (15)January (4)2011December (3)November (10)October (37)September (11)August (20)July (29)June (21)May (81)April (32)March (41)February (45)January (64)2010December (21)November (14)October (16)September (18)August (27)July (18)June (21)May (24)April (14)March (33)February (41)January (33)2009December (52)November (42)October (26)September (28)August (29)July (27)June (23)May (28)April (24)March (34)February (49)January (53)2008December (72)November (54)October (72)September (41)August (26)July (43)June (21)May (19)April (11)March (19)February (7)January (21)2007December (27)November (40)1999November (13) Welcome toMyanmarITPro - A Social Network for Myanmar IT Professionals
nyiminthit postedastatus"TPlink-TD8816 modern Router ကို config လုပ်ချင်လို့ ပါ အင်တာနက်လိုင်းမတက်လို့ တိုင်ပတ်နေလို့ ကူညီကြပါဦး ခင်မျာ"23 hours ago 0
Htet Oo Zaw replied to GaaRa's discussionှုYatanarpon ADSL နှင့် Elite Fiber(FTTX) အင်တာနက်လိုင်း နှစ်လိုင်းကို load balancing လုပ်ချင်လို.ပါyesterdayHtet Oo Zaw updated their profileyesterdayzaw moe tun updated their profileyesterdayဇော်ထွန်း နေပြည်တော်, zaw lin tun, Lina and 185 more joined MyanmarITPro - A Social Network for Myanmar IT ProfessionalsyesterdayPhyo Phyo postedastatus"I want to know banking network .How to operate network."Thursday 0
Phyo Phyo updated their profileThursdaykohla and Nay Min are now friendsWednesdaykyawzinlatt shared manawphyulay's blog post on Facebookလုပ်ငန်းခွင်မှ လူငယ်များအတွက် အဆင့်မြင့်အသက်မွေးမှု အတတ်ပညာသင်တန်းကျောင်း CVT MyanmarJul 22Hteinlinaung liked Aung Myint Tun's blog post အင်တာနက်သုံးရင်း တစ်နေ့ကို $160 ရမည့် Online ငွေရှာနည်းJul 20လွဲနေ replied to Kam's discussion Kerio winrout firewall တင်ရင်Blue screen တက်တယ်. Why? in the group Ask MITPJul 19kglay@it postedastatus"http://j.mp/1zvgOAx"Jul 12 0
© 2014 Created by Ko Chit. Badges | Report an Issue | Terms of Service